Mbishi zvigadzirwa muchikafu: imwe nzira kune investa | Ehupfumi Zvemari
Iwo makambani ari muchikamu ichi akarongedzwa mune yavo indekisi iyo inogona kushandira kugutsa investor kudiwa. Nekudaro, kurerutsa mashandiro, zano rinoshanda kwazvo rinogadzirwa kuburikidza yakanyorwa mari. Iwe unogona kunyange kuvhura zvinzvimbo kubva kumisika yepasi rose uko kwakanyanya kukosha chikafu chakanyorwa, kunyangwe uchifunga zvimwe njodzi mukufamba kukuru.
Chikafu hachisi chinhu chete chehupenyu hwehuwandu hwevanhu. Iyi sarudzo nyowani yekuita kuchengetedza kunobatsira kubva munzira dzakasiyana, asi nechinangwa chakafanana: kuwana kudzoka pamari. Iri zano rinogona kuzadzikiswa kubva kumakambani akanyorwa akatsaurirwa kune ayo ekutengesa: Ebro Chikafu, Deoleo, Telepizza kana Natra pakati pezvakanyanya kukosha zveSpanish equities. Kunyangwe zviri nyore kwazvo kukudziridza ichi chishuwo kuburikidza neyekutsinhana-yakatengeswa mari inoenderana neichi chikamu. Chero zvazvingaitika, ichagara iri yekupedzisira nzira yekuenda kune ese iwo maindex ayo ari pamusoro pe zvekudya zvekutanga. Zvakadai seshuga, soy, gorosi, nezvimwe. Iwo akanyorwa pane akakosha emisika emari munyika.
Chero zvazviri, chero sarudzo, panowanikwa dhinomineta mune izvi zvese zvirongwa zvekudyara. Icho hachisi chimwe kunze kwebasa ravo revapoteri pamberi pezviitiko zvisina kunaka yemisika yemari. Nechikonzero chiri nyore kwazvo kune vese vatengesi kuti vanzwisise uye ndezvekuti avo emabhizinesi mamodheru haasi e cyclical. Ndokureva, mashandisiro ayo haanzwisise kutenderera kwehupfumi, asi zvinopesana, inoitwa sechinhu chakakosha kuvanhu. Kubva pane izvi features Inguva yekuona kuti ndeapi mamodheru ekudyara anogona kugutsa ichi chakakosha kudiwa.
1 Kuchengetedzwa kwakakamurwa mune ino chikamu
2 MaIndices pamusika wepasi rose wemusika
3 ETFs kusiyanisa mari
4 Zvakanakira iyi mari
5 Kukanganisa kwekudyara uku
Kuchengetedzwa kwakakamurwa mune ino chikamu
Kana kukwirisa kwakanyanya kusingadiwe, mhinduro yakanakisa ndeyekutenga nekutengesa migove pamusika wemasheya. Icho chikamu muSpain chakanyanya kushomeka maererano nenhamba yezvisungo zvemusika wemasheya, asi izvo zvinopa kushomeka kushoma zvine chekuita nemutengo wayo wekoteshiti. Kusvika padanho rekuchengetedza zvinzvimbo zvevashambadziri pakuratidzika kwe pinda mumisika yemari. Nepo misiyano mumutengo wavo muchikamu chimwe chete chekutengesa isinga pfuure 2%, kusiyana nemamwe zvikamu zvine hukasha (matekinoroji, mabhangi kana makambani ekuvaka) ane margins anogona kukwira kusvika pa5%.
Nekudaro, kuti uwedzere kugoverwa kwechikamu chekudya, sarudzo inonzwisisika ndeyekutendeukira kumusika weEuropean wemusika unomiririrwa na indekisi Stoxx 600 Europe Chikafu & Beverage. Inopa rondedzero inosanganisira makambani akadai saNestlé, Unilever naDanone, pakati pevamwe vanozivikanwa. Iko kushanduka kweichi chikamu pamusoro pegore rapfuura kwave kwakanaka, kuchikoshesa kutenderedza 10%. Pasi pemaperesenti akafanana epfuma seaya akagadzirwa muEurostoxx 50.
MaIndices pamusika wepasi rose wemusika
Pane imwezve nzira yekutora zvinzvimbo mune izvi zvemari zvinhu pasina vapindiri. Asi zvakanangana nemaindices epasi rese uko kunotengwa zvekudya zvekudya (shuga, kofi kana gorosi. Kunenge kusisina sarudzo kunze kwekuenda kumisika yakakosha yemari, senge United States neGreat Britain. shanduko isina kuenzana zvinoenderana nemafomati akasarudzwa. Imwe yeanoburitsa aya ndiyo Chinokosha CRB Kofi iyo inoratidza kusiyanisa kwegore rega kwe0,25% chete. Imwe sarudzo ndeyekuunza pamwechete dzinoverengeka zvezvinhu zvakasvibirira mune imwechete indekisi senge iyo inomiririra Global Agri TR iyo yakadzoserwa mumwedzi gumi nembiri yekupedzisira ne22,7%.
Uye aya mabhenji echiratidzo haabvisirwe pakurasikirwa nekutambura mukushanduka kwavo mukati megore remari rapfuura. Sezvazviri mune chaiyo kesi ye Chinokosha CRB Shuga iyo yanga yasara panguva ino 2,76% yeiyo kukosha. Kunyangwe ichiita kunge yakati sandara, senge Chinokosha CRB Orange Muto iyo haina kumboburitsa shanduko mumutengo wayo nekugadzira yakanyanya lateral maitiro.
ETFs kusiyanisa mari
Iyo inozivikanwa zvakare semari yekutsinhana-inotengeswa, zvigadzirwa izvi zvinotora kuvepo kwezvinhu izvi mumisika yemari. Mutsika vakarova zvimwe zvinhu mukuita purofiti panguva yezviitiko zvekukwira kwemitengo uye kunyange kuderera kwemari mumisika yemari. Panguva imwecheteyo inoshumira vatengesi kuti vazvidzivirire panjodzi mune hupfumi. Pasi pemabatiro aya, ma ETF maviri aonekwa anopa hunhu uye atanga kutengeserana kuLondon Stock Exchange. Kuti uwane uyu musika nenzira yakasiyanasiyana uye nekugadzira kukura kubva kune yakachipa kwazvo mipiro yezvehupfumi.
Imwe yemari yekutengesa mari ndeye ETFS Zvese Zvigadzirwa GO UCITS, iyo inokonzeresa zano rayo pakuteedzera chinhu chemberi ramangwana indekisi yemwedzi. Iyo inogadziriswa pasi peyezve pfupi-nzira nzira. Imwe sarudzo, ETFS Yakareba Yakatarisana Nezvinhu Zvese Ex-Zvekurima Uye Zvipfuyo, inoshanda pane indekisi ye ramangwana rerefu iyo inosiyaniswa nekuwedzera kune imwe mari yemari kubva kusimba remagetsi nesimbi. Chero zvazviri, izvo zvigadzirwa zvinosanganisa kudyara mumusika wemasheya uye mari yekudyara.
Zvakanakira iyi mari
Ehe, iwe uri kutarisana nekudyara kwakawanda kupfuura vashoma varipo panguva ino. Izvo chaizvo nekuda kwechikonzero ichi kuti inoda kutariswa kwakasarudzika kubva kwauri. Kunyanya nekuti inoda ruzivo rwakakura rwe misika kunoshanda zvinhu izvi zvemari. Kusvika pakuti kana ukasatevedzera une njodzi yeku kurasikirwa nemari yakawanda akaiswa mari mune izvi zvemari zvinhu. Kubva pane ino yakajairika mamiriro, izvi ndizvo zvimwe zvezvakanaka zvinounzwa neiyi mari mukirasi yezvinhu zvakagadzirwa.
Iyo yemhando yekudyara iyo inogona kubatsira zvakanyanya kupfuura vamwe pane imwe nguva. Kunyanya kana misika yemakambani isiri kuenda panguva dzakanakisa uye iwe usina sarudzo chaidzo dzekuita kuti ako epfuma abhadhare. Hazvishamisi kuti pane imwe nguva kana zvimwe zvigadzirwa mbichana zvinogona kuva kukosha kwekupotera kwechikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati.
Icho chinhu chakanaka icho chakakosha kune huwandu hwenyika uye nekudaro pachagara paine chinodikanwa cheichi chikafu. Kusvika padanho hombe kana diki uye ndizvo zvichave zvinotara mitengo yakatarwa nemisika yemari. With oscillations iyo inogona kuve yakasimba kwazvo semhedzisiro yenhanho yekugadzira nekushandisa. Zvekuti iwe unogona kutora mukana nazvo kuita mashandiro uye kuwana hombe capital capital mune mashandiro auchazoita kubva zvino zvichienda mberi.
Ehezve, iri imwe nzira yekudyara asi iyo isingaregererwe kubva kune yakanakisa purofiti ratios. Chinokosha chichave pakuziva sarudza nguva yekupinda uye kana uchigona kuenda nenguva yakafanira. Saka kuti nenzira iyi, mari yaunowana inogutsa kupfuura zvakajairwa. Kunyangwe pamusoro pekufambira mberi kwakagadzirwa mune zvakajairika misika yemari. Saka kuti iwe unokwanisa kukwirisa mashandiro ako ese kubva panguva yekutanga.
Izvi ndizvo zvigadzirwa zvinozivikanwa kune vese uye izvo zvisina kuomarara sevamwe. Kubva pane ino maonero, iwe unenge uine chengetedzo izere yekuziva kwaunoisa mari yako. Pasina chero rudzi rwezvisinganzwisisike kwave kuenda kumipiro yako yemari uye izvo zvinogona kukutungamira kune zvishoma zvishoma pane asingadiwe mamiriro. Sezvazvakaitika mumakore achangopfuura neaya anonzi zvigadzirwa zvine chepfu zvemari. Ehezve, izvi hazvisizvo, kunyangwe paine njodzi yekuti mashandiro akadaro anosanganisira.
Kukanganisa kwekudyara uku
Mbishi zvigadzirwa, kune rimwe divi, zvakare zvinogadzira akateedzana ekukuvadza iwe aunofanirwa kuziva kubva panguva ino chaiyo. Saka kuti iwe unenge wakachengetedzwa mune ese mashandiro auchazoita kubva zvino zvichienda mberi. Izvi ndizvo zvimwe zvakakosha.
Ivo vanoda a kuomarara kukuru iyo inotorwa kubva pahunhu chaihwo hwezvinhu izvi zvakasvibirira. Ehezve, hazvina kufanana nekutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya. Asi, inotongwa neanosiyana michini. Hazvisi nani kana zvakanyanya kuipa, kana zvisiri zvakasiyana.
Kuda kuti iwe une kudzidziswa kwakanyanya kupfuura kuburikidza nezvimwe zvinhu zvemari. Kana iwe ukasasangana neichi chakakosha chinodiwa, zvichave zvirinani kusarudza imwe kirasi yemari iwe yawakajaira kushanda nayo. Iyi yekudyara haina kukodzera kuenda kana iwe usingazive mashandiro ayo mamakanika.
Izvi mbishi zvigadzirwa zvakatengwa pamutengo panenge yakatarwa misika yemari uye hazvisi nyore nguva dzose kushanda nedzimwe nzira dzekudyara. Kunyangwe kugadzirisa yekupinda uye yekubuda mitengo yezvinzvimbo zvezvigadzirwa izvi.
Izvo hazvikurudzirwi zvakanyanya kugovera zvihombe muhomwe idzi. Asi zvinopesana chikamu chidiki chinokwana kubva zvakafanana. Nenzira iyi, iwe unozozvipa iwe unoshanda zvakanyanya dziviriro kumabasa anoitwa. Nekuti kana paine dhinomineta mune izvi zvemari zvinhu, iko kusagadzikana mumitengo yavo. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uko kunogona kukanganisa kuongororwa kwerudzi urwu rwemari. Chinhu chisingaitike mune zvimwe zvigadzirwa zvemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Mbishi zvigadzirwa mune zvekudya: imwe nzira kune mari